Rehefa misintona ny kaonty Neteller sy Skrill aho dia ilaina ny fanamarinana.
IQOption » News » FAQ IQoption » Rehefa misintona ny kaonty Neteller sy Skrill aho dia ilaina ny fanamarinana.
Rehefa misintona ny kaonty Neteller sy Skrill aho dia 'ilaina ny fanamarinana'. Inona no tokony hataoko azafady?
Midika izany fa mila mandefa ireo antontan-taratasy ho fanamarinana izahay, arakaraka ny firenena nihavianao, azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny hafatra avy amin'ny kabinetranao mba holazainay aminao ny antontan-taratasy ilainao handefasana anay.
← Ahoana no fomba hametrahako vola sy hisintona amin'ny alàlan'ny e-wallet any Afrika Atsimo? Fa maninona no mora kokoa ny manao tahiry noho ny miala amin'ny iqoption? →